🥇 ▷ Ori Xbox One iyo Will ee La Wisps ayaa loo heli karaa pre-order… ✅
Ori Xbox One iyo Will ee La Wisps ayaa loo heli karaa pre-order…
Ori iyo Will of La Wisps waa mid ka mid ah ciyaaraha Xbox-ka aadka loo filayo iyo hamiga leh. Ciyaartan waxaa soo saaray Moon Studios waxaana la sii deyn doonaa Maarso 11, 2020, Xbox One, Windows 10 PC, Steam iyo maalinta koowaad ee Xbox Game Pass. Si kastaba ha noqotee, ciyaartan waxaa loo heli karaa amarro horudhac ah oo loogu talo galay kuwa jecel ciyaarta oo khaas ah dukaanka Microsoft.
Ayadoo tan la mid ah, Xbox Game Studios ayaa sidoo kale bilaabay Daabacaadda Qoraalka aruurinta ee Ori iyo Will of La Wisps, kaas oo hada diyaar u ah pre-amarada. Daabacaadan waxaa ku jira buugaag, CD-yada iyo cajaladaha codka, iyo waxyaabo kaloo badan.
Ku saabsan ciyaarta
Noocyadii hore ee Ori iyo Will of La Briznas ee loo yaqaan Ori iyo La Blind Forest, taas oo ah guul weyn oo waliba heshay abaalmarino badan oo ku saabsan waxa ku jira. Ori iyo Will of La Wisps sidoo kale waxay u muuqdaan kuwo aad u rajo weyn xagga dalacsiinta iyo ciyaarta demo sidoo kale waxay u muuqataa wax aan caadi aheyn.
20-daqiiqo daqiiqad ciyaar fur fur oo ay la mid yihiin walxaha ciyaarta oo ay weheliso waxyaabo dheeri ah. Ori iyo Will of La Wisps waxay daahfurtaa awoodaha cusub ee Ori, oo ay kujirto khariidado qurux badan oo adduunyo iyo ururin ururu ah oo lagu xoojinayo dabeecada. Koontaroolka ciyaarta iyo makaanikada waxay umuuqdaan kuwo aad u xoog badan oo fudud oo wax looga qaban karo.
Ori iyo Will of La Wisps waxay leedahay dhowr isbadal oo muhiim ah xaga naqshada iyo nashqadeynta. Sawirku wuxuu horumar badan sameeyay isla markaana goobtiisu sidoo kale way isbadashay, laakiin waxay wali leedahay jawiga kaynta sixirka sixirka. Muusikada asalka ah ee ugu wanaagsan waxay ka dhigeysaa Dunida Ori more more live.
Qeyb kasta oo cusub oo ciyaarta ah waxay furaysaa xirfado cusub oo loogu talagalay Ori. Isha ruuxa raacaya Ori waxay umuuqataa inay tahay mid ku cusub ciyaarta. Ayadoo tan la mid ah, Ori waxaa la siin doonaa hub sida hammers ruuxiga ah iyo fallaadho ruuxiga ah si ay si sahal ah ula dagaallamaan.
Soo-saareyaashu waxay ballanqaadeen inay bixiyaan illaa 60 xabbadood halkii sebil iyo 4K oo dhab ah oo ay ku xallinayaan HDR. Hagaag, waa hammi weyn, laakiin markaan fiirino banaanbaxyada iyo dalacsiinta ciyaarta, waxaan durba dhihi karnaa Ori iyo Will de La Wisps ayaa noqon doona midka xiga ee weyn doona Xbox.
Ori iyo Will of La Wisps ayaa diyaar u ah pre-Order hadda. Mid mid u yeel kuwa kale.